China Ems Pcb Assembly ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Kaisheng PCB
PCBFuture တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏မျှော်လင့်ချက်များထက်ကျော်လွန်ပြီးသေချာစေရန်အတွက်ပင်မအဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်နောက်ဆုံးပေါ် PCB နည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများ၏ယုံကြည်မှုနှင့်လေးစားမှုကိုရရှိရန်ကူညီပေးသည်။
အလွှာများ - 14 အလွှာ PCB
သတ္တုကုတ်အင်္ကျီ: HASL - ခဲအခမဲ့ ထုတ်လုပ်မှုပုံစံ: SMT + Layers: 14 Layer PCB
ဂဟေဆက်အမျိုးအစားများ - ခဲ (RoHS လိုက်နာမှု) One-Stop န်ဆောင်မှုများ: အစိတ်အပိုင်းများ, PCB ထုတ်လုပ်မှု, PCB ညီလာခံ စမ်းသပ်ခြင်း: ၁၀၀% AOI / X-Ray / Visual Test
နည်းပညာအထောက်အပံ့: အခမဲ့ DFM (ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒီဇိုင်း) စစ်ဆေးပါ အသင်းတော်များအမျိုးအစားများ: ရောနှောထားသောနည်းပညာ PCBA စံ: IPC-a-610d
သော့ချက်စာလုံးများ - EMS PCB ညီလာခံ၊ PCB တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်း၊ PCB တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ PCB လူ ဦး ရေ၊ PCB ညီလာခံထုတ်လုပ်သူများ၊ PCB ညီလာခံကုန်ကျစရိတ်၊ စျေးပေါ PCB ညီလာခံ,
ပုံမှန်နှင့်ထုံးစံ PCB ထုတ်လုပ်မှုမှစ။ turnkey PCB ဖြေရှင်းနည်းများအထိ, PCBFuture အရာအားလုံး PCB များအတွက်တစ်နေရာတည်းမှာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကြသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ PCB တပ်ဆင်ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးပါ?
ဆားကစ်ပြားများကိုအပြီးသတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာရှည်ခံသောအတွေ့အကြုံကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေး၊ ဖြန့်ဝေမှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်စီးပွားရေးဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုအခြားမည်သည့် PCB ထုတ်လုပ်သူများထက်စျေးကွက်အတွင်းသို့ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။
PCBA ၏ပေးပို့ချိန်သည်ကြိုတင်စစ်ဆင်ရေးနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ်သည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကိုအရင်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်လိုအပ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးပြီးဆုံးပြီးနောက် ၃ ရက်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်။ DIP အပြောင်းအလဲရှိလျှင်ပို့ဆောင်ရန် ၅ ရက်မှ ၇ ရက်အထိကြာလိမ့်မည်။ အရေးပေါ်အမိန့်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင်အကြောင်းကြားပြီးအခြားအစီအစဉ်များလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
1. စံထုတ်လုပ်မှု BOM
၂။ PCB ဖိုင်များ၊
Jigsaw Gerber ဖိုင်များ၊
၆။ SMT ရှေ့နှင့်နောက်ပစ္စည်းများ၊ DIP ပစ္စည်းများနှင့်စာရင်း၏ရောစပ်စာရင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သော ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ဒဏ်repairာရီပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းမူဝါဒများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးသောတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးများကိုအချိန်နှင့်ဘတ်ဂျက်အတွင်းတွင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကဆက်သွယ်ပါsales@pcbfuture.com ငါတို့သည်သင်တို့ ASAP သင်ပြန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့သို့ Controller ဘုတ်အဖွဲ့ Printed Circuit Assembly
နောက်တစ်ခု: Flex PCB ညီလာခံန်ဆောင်မှုများ